I-Talk Show I-Audience Etiquette: Iingcebiso, i-Dos, ne-Donts
Umbonisi wangaphambili othi 'Jonga' wabelana ngeziphakamiso zakhe
Ucinga ukuba kuya kuba lula ukuba ilungu leentetho zokuphulaphula. Fumana ithikithi yamahhala kwintetho yakho oyintandokazi, gcina usuku kwikhalenda yakho, bonise kwi-studio uze ubukele intetho yakho ye-fave ibonisa ukuhlaselwa kwezilumko eziziindwendwe kunye neendwendwe ezidumileyo kunye neengoma zomculo we-baller.
I-Tip No.1: Gqoka into enhle
Kodwa ukuba ilungu labaphulaphuli lilukhuni kunalo. Umzekelo, zikhona iimpahla ezithile kufuneka uzigqoke kunye nezindlela ezithile omele usebenze ngazo.
Ngamanye amagama, gqoka kakuhle. Ngokuqhelekileyo ishishini elingaqhelekanga okanye eliqhelekileyo / eliphakamileyo, ngokukodwa xa uza kubona umboniso weentsuku zentsuku obonisa abaphulaphuli kwiimpawu zekhamera. Gqoka ekhanyayo, imibala eqinile. Ayikho ipatati ephathekayo, akukho iipostiki, akukho iinqanawa, akukho zifutshane, iipketi okanye i-tank top.
Icebo 2: Musa ukukhathaza umphathi okanye abasebenzi bokuvelisa
Emva koko, njengelungu lokuphulaphula, ngokwenene ungumyinge wemveliso. Indlela oziphatha ngayo inefuthe ngqo kwi-flow show. Musa ukubuza imibuzo yemikhosi ngexesha lokuthayipha okanye ukucela i-autographs ngexesha lekhefu lokuthengisa. Umphathi usebenza, emva koko. Kwaye ungafuni ukukhathazeka xa wenza umsebenzi wakho, akunjalo?
Ukubonisa ababonisi abaphulaphuli beentetho, njengoKeith Quinones, owayengumququzeleli wangaphambili, ufuna ukuba wenze okusemgangathweni kwiprogram. Bafuna ukuba ube nomdla kwaye ubandakanyeke kulo mboniso.
I-Tip No. 3: Qinisekisa ukuba unesimboli se-photo
Bakufuna ukuba ulethe ilayisenisi yakho yokuqhuba.
"Silindele amalungu ephulaphuli ukuba alethe uhlobo lokuchonga kunye nokugcinwa kwetikiti zabo," kusho u-Quinones. Emva koko, iikitikithi zokubonisa ziyakwazi ukukhululeka, kodwa azidluliswanga. Kwaye "uhlobo oluthile lokuchonga" lithetha ilayisenisi yokuqhuba, i-ID yombuso okanye enye i-ID ekhutshwe ngu-ID.
Umququzeleli womphulaphuli ufuna ukwazi ukuba ngubani ophulaphuli bakhe, kwaye ukuba ngubani abo bathi ba.
Eninzi into enxulumene nokukhusela, kodwa ikwafana nokulawula ubungakanani kunye nokwenziwa kwabaphulaphuli. Yingakho intetho eninzi ibonisa ukuba amathikiti-nangona akhululekileyo-ahlala engadluliswanga.
Icebo 4: Musa ukuzisa ezi zinto
Kukho nenani labalathisi abaphulaphuli bafuna ukuba ushiye emva kokufika. Ezi zinto ziquka iifowuni, imithwalo, iispack okanye iifowuni ezinkulu zokuthenga. Olu luhlu luyahlukahluka kumboniso weentetho, naye. Ezinye iintetho zeentetho azikhumbuli ukuba uzisa umnxeba wakho, nje kuphela xa uqhubeka ucima ngexesha lokuthayipha. Abanye bayakufuna ukushiya emva kokuba umboniso usuphelile.
"Abaninzi abaphulaphuli bayamangalisa ukuba abakwazi ukuzisa ukutya okanye isiselo phakathi kwesakhiwo, ngaphandle kwamanzi," kusho u-Quinones.
Izinto ezinobunjengezinto eziqhekezayo, iifayili, iifayile zeekhonkco, ukudibanisa iinaliti kunye nemiguqo yepokhethi nazo zivinjelwe. Zibeka umngcipheko wokhuseleko kubo bobabini abaphulaphuli kunye nemikhosi.
Ungaxhalabi. Ukuba kwenzeka ukuba uphathe amaqhekeza akho kumboniso, amaqela okukhusela okubonisa intetho aya kubamba zonke izinto ezivinjelwe kude kube emva kokubetha. Emva koko uza kuvunyelwa ukuthabatha nayiphi na into ebanjwe ngaphambi kokuba uphume kwisikrediyo.
I-Tip No. 5: Unokwazi ukuzisa ikhamera nawe
Kwiphepha le-flip, i-Quinones ithi kukho into enye Ukujonga amalungu avunyelwe ukuza kule studio ukuba bacinga ukuba baya kuvalwa.
"Abaninzi abaphulaphuli bayamangaliswa ukuba bayakwazi ukuthatha imifanekiso ngexesha lokuphumla kweentengiso kunye nekhameraji okanye ityala elilahlayo," kusho u-Quinones. Ukuphila kunye neKelly & Michael amalungu aphulaphulayo angazisa kwakhona ikhamera.
Ngokuphulaphula izinto ozenzayo kwaye ungenzi nto yintetho yakho intetho oyintandokazi-kwaye ungakhathazeki, ziya kubalwa ngokucacileyo njengomhla-uya kuqinisekisa ukuba unethuba elihle kwaye umboniso ukhupha inkqubo enkulu ukuba nwabele.
I-Top 10 Talk Show Hosts
UBetty White: UMongameli wokuqala weeMidlalo
9 IHalloween "iMinute yokuYinqoba" iMidlalo yeMidlalo
Ubani "Owasindileyo: I-Panama - Isiqithi sase-Exile"?
Kutheni Abantu Abaninzi Bathanda Umdlalo Wemidlalo Eyona Njalo "Umzalwana Omkhulu"
Emva kweMifanekiso kwiJimmy Kimmel Live
Inkqubo yokuHlola ngokuqhelekileyo
IJografi yeSithili saseSichuan, eChina
Ingcaciso efutshane kaPompey Omkhulu (uPompeius Magnus)
Yintoni eyenzekayo kuMongameli uJohn F. Kennedy's First Casket?
"Credo kwi-Dio crudel" Iingoma kunye neNguqulelo yeTekisi
Isifundo seBakala lesiBakala lesiBakala lesi-2
Amaqiniso Ngo-Oviraptor, i-Egg Thief Dinosaur
I-Mandarin Tone System
Yintoni ethi "Un Boîte" ithetha ngesiFrentshi?
"Guantanamera": I-Famous Famous Cuban Folk Song
I-Mariner 4: I-America yokuqala yokuVala Ukujonga i-Mars
Uluhlu lweeNzululwazi zeSayensi
Indlela yokwenza nokusebenzisa iziqhumiso zakho
5 Iintsebenziswano eziphambili zeNdibano yoMgaqo-siseko
Imihlaba yokuPhumla kweeMisa ezili-10 ezinkulu
I-Magnesium - Izinto eziMlilo
I-Building Best Building Building: i-Brachialis Curls
I-Taurus Ngama-Aquarius: Uthando lwabo luhambelana
4 Iimigaqo zoLawulo lweeKlasini kunye nokuFunda kweZempilo zengqondo
Ithini i-Hontou in Japanese?
8 i-Classic Spy Movies